रसुवागढी र सान्जेनको सेयर किन्न डेढ लाख सञ्चयकर्ताको आवेदन - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
रसुवागढी र सान्जेनको सेयर किन्न डेढ लाख सञ्चयकर्ताको आवेदन
फागुन २७, २०७४ 18456 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
रसुवागढी हाइड्रो पावर र साञ्जेन जलविद्युत कम्पनीको सेयर खरिद गर्न १ लाख ५७ हजार ७ सय ५६ सञ्चयकर्ताले आवेदन दिएका छन् । रसुवामा निर्माणाधीन १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी र ५७.३ मेगावाटका सान्जेनका आयोजनाको सेयर खरिद गर्न उत्साहजनक आवेदन परेको हो ।
गत फागुन ११ गतेबाट बिक्री खुल्ला गरिएको दुवै कम्पनीको सेयर खरिद गर्न परेको आवेदनबाट ४ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख ८० हजार ६ सय रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
रसुवागढीले सञ्चयकर्ताका लागि १ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख ९ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको सेयर निष्कासन गरेकामा ७९ हजार ४ सय ७९ आवेदन परेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव कोइरालाले बताए । कम्पनीले सञ्चयकर्ताका लागि १ सय रुपैयाँ दरको १ करोड ३३ लाख ४२ हजार ९५ कित्ता सेयर जारी गरेको छ ।
४ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख ८० हजार ६ सय रुपैयाँ संकलन, रसुवागढीमा साढे २ गुणा बढी आवेदन पर्यो
कोइरालाका अनुसार आवेदनबाट ३ अर्ब १५ करोड ५१ लाख ८० हजार ६ सय रुपैयाँ संकलन भएको छ । सेयर खरिद गर्न संचयकर्ताबाट परेको आवेदन साढे २ गुणाले बढी हो । अन्तिम चरणमा थप ५१ हजार आवेदन पर्ने सम्भावना रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यस्तै, सान्जेनको सेयर खरिद गर्न ७८ हजार २ सय ७७ सञ्चयकर्ताको आवेदन परेको छ । आवेदनबाट १ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । सान्जेनले संचयकर्ताका लागि ७१ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको ७१ लाख १७ हजार ५ सय कित्ता सेयर जारी गरेको छ । सान्जेनको सेयर खरिद गर्न सञ्चयकर्ताको भीड लागेको छ ।
देशभरका सञ्चयकर्ताले रसुवागढी र सान्जेनको सेयर खरिद गर्न फागुन ३० गतेसम्म आवेदन दिन पाउने छन् । संचयकर्तापछि आगामी चैत ५ गतेबाट संस्थापक संस्था (नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी र रसुवा जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तह) र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि सेयर बिक्री खुल्ला गरिने छ ।
संस्थापक संस्थाका कर्मचारीका लागि रसुवागढीले २३ करोड ९४ लाख ७३ हजार ५ सय रुपैयाँको २३ लाख ९४ हजार ७ सय ३५ किता सेयर निष्कासन गर्नेछ ।